Nzuzo: Too ahịa ụlọ ahịa ọnlaịnụ gị site na iji ngwa ahịa ahịa Ecommerce zuru oke | Martech Zone
Nzuzo: Too ahịa ụlọ ahịa ọnlaịnụ gị site na iji ikpo okwu ahịa ecommerce zuru oke
Inwe usoro mgbasa ozi nke ọma na akpaaka bụ ihe dị oke mkpa nke saịtị e-azụmahịa ọ bụla. Enwere omume 6 dị mkpa nke atụmatụ ịre ahịa e-commerce ọ bụla ga-etinyerịrị n'ihe gbasara ozi:
Too Ndepụta Gị - Ịtinye ego nnabata, ịtụgharị-na-emeri, mbupụ-apụ, na mkpọsa mbupụ iji mepụta ndepụta gị ma nye onyinye na-akpali akpali dị oke mkpa maka itolite kọntaktị gị.
Campaigns - Izipu ozi-e nnabata, akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu, onyinye oge, na ederede mgbasa ozi iji kwalite onyinye na ngwaahịa ọhụrụ dị mkpa.
Mgbanwe - Igbochi onye ọbịa ịpụ na ngwaahịa n'ime ụgbọ ala site n'inye ego ego bụ ụzọ dị mma isi na-abawanye ọnụego mgbanwe.
Agbahapụ ụgbọ ibu - Na-echetara ndị ọbịa na ha nwere ngwaahịa n'ime ụgbọ ibu ahụ bụ ihe dị mkpa na, ikekwe, nwere arụmọrụ kachasị ukwuu nke atụmatụ akpaaka ahịa ọ bụla.
Mgbasa ozi ire ere - Ịkwado ngwaahịa ndị yiri ya bụ ụzọ dị mma iji mee ka ọnụ ahịa ụgbọ nke onye ọbịa gị dịkwuo elu ma chụpụ ahịa ndị ọzọ.
Enyemaka mmanya kacha elu - Inwe ogwe igodo ụzọ dị elu na saịtị gị nke na-akwalite ire, onyinye ma ọ bụ nkwanye ngwaahịa kachasị ọhụrụ na-akpali ntinye aka na ngbanwe.
Winback ndị ahịa - Ozugbo onye ahịa zụtara gị, ha nwere atụmanya nke edobere, yana ime ka ha zụta ọzọ dị mfe. Ihe ncheta ma ọ bụ onyinye egbuola oge ga-eme mgbanwe.
Ịzụta Nsoso - Nlebanya dị oke mkpa maka saịtị e-azụmahịa ọ bụla, yabụ inwe email na-esochi nke na-arịọ nyocha, na-atụ aro ngwaahịa, ma ọ bụ naanị na-ekwu ekele bụ ụzọ dị mma isi mee ka ndị ahịa gị tinye aka.
Templates - Ihe ndebiri egosipụtara nke a maara na-emepe emepe, pịa-throughs, na ntụgharị bụ ihe dị mkpa ka ndị na-ere ahịa ghara ịme nyocha ma ọ bụ mepụta nke ha.
Nzuzo Ecommerce Marketing Platform
Privy na-enye otu n'ime njirimara ndị a iji nye usoro ịzụ ahịa e-commerce zuru oke maka gị Shopify ụlọ ahịa.
Vygwọ ọrụ bụ ikpo okwu kacha enyocha na Shopify App Store… nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 600,000 na-eji ikpo okwu ha! Ọbụghị naanị na ha nwere otu n'ime nyiwe kachasị ọnụ ọnụ, Privy nwekwara nnukwu mkpokọta akụrụngwa ịntanetị ka ị mụta ka ị ga-esi zụọ ụlọ ahịa ịntanetị gị nke ọma.
Ọbụlagodi na ịdebanyeghị aha, a ga m akwado ka ị debanye aha wee nata Privy's Kalenda ezumike Ecommerce. Ọ bụ kalenda nke ị nwere ike budata, bipụta, ma jikwaa aka ya… o nwekwara ohere maka ndetu. Ha ga-ezikwa gị ozi-e site na mkpali na ncheta kwa ọnwa ka ị ghara ịhapụ ezumike ọzọ.
Gbalịa Privy n'efu
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ m maka Vygwọ ọrụ na Shopify ke ibuotikọ emi.
Tags: nnwetaagbahapụ agbahapụmkpọsa ire erendị ahịa mmerimkpọsa ecommerceemail ecommerceecommerce email ndebiriecommerce nyochaakpaaka emailemail Marketingemail ndebirimụbaa mgbanwendepụta utoịzụ ahịa n'ịntanetịmkpọsa ịzụ ahịa n'ịntanetịnzuzoNkwado ngwaahịaịzụrụ nsonyeụlọ ahịaZụọ ahịa GụnyereSMStụgharịa-na-emerinnweta nnwetan'elu mmanyaOgwe igodo n'elu
Onye ode akwụkwọ: Mepụta, bipụta ma tinye ntuziaka ụdị gị site na iji enyemaka ide ihe AI ​​a.